Sidee shaqo looga helaa Amsterdam? - ALinks
Loo shaqeeyayaasha Amsterdam waxay si isa soo taraysa ugu diyaar garoobeen sidii ay ula jaan qaadi lahaayeen saacadaha shaqada ee aan caadiga ahayn, hoos u dhigista usbuucyada shaqada, iyo shaqada fog. Nederland waxaa badanaa loo arkaa inay tahay mid ka mid ah waddamada ugu waaweyn ee lagu gaaro isku dheelitirnaan shaqo-nololeed oo wanaagsan iyo tayada guud ee nolosha. Nederland waa waddanka ugu aqoonta badan Ingiriisiga ee aan ku hadlin Ingiriisiga, taas oo ka dhigaysa meel aad u fiican oo looga shaqeeyo duuggii hore ee Mareykanka.
Marka, sidee ku aadeysaa inaad shaqo ka hesho Amsterdam?
Go'aami inaad fiiso u baahan tahay iyo in kale.
Ka shaqeynta Nederland waxay u baahan tahay rukhsad degenaansho iyo, xaaladaha qaarkood, ogolaansho shaqo. Awoodaada helitaanka rukhsadaha waxaa si weyn u saameeyay wadankaaga iyo asalkaaga.
Tixgeli noocyada shaqooyinka ugu caansan Amsterdam.
In kasta oo shaqo badan oo Nederland ah laga heli karo Amsterdam, warshadaha qaarkood ayaa ka muhiimsan kuwa kale. Nederland si tartiib tartiib ah ayey sumcad ugu heleysaa warshadaha teknolojiyadeeda, waxayna muddo dheer xarun caalami ah u aheyd wax soo saarka macaamiisha. Intaa waxaa dheer, Amsterdam waa xarun loogu talagalay warshadaha hal-abuurka ah, xayeysiinta, ciyaaraha, moodada, cilmi baarista, iyo sayniska nolosha.
Ka raadi liistada internetka.
Shaqo raadinta khadka tooska ah waa mid ka mid ah hababka ugu waxtarka badan ee shaqo looga helo Amsterdam. Kuwa soo socda ayaa ah qaar ka mid ah bogagga internetka ee ugu waxtarka badan:
Raadinta Shaqo ee iAm Amsterdam waxaa ka mid ah jagooyinka furan ee warshado badan, gaar ahaan doorarka kuwa aan ku hadlin Dutch.
Amsterdam Jobs Online waxaa lagu heli karaa oo keliya Nederlandka, in kasta oo ay soo saartay Xafiiska Shaqada Dadweynaha ee Nederland oo ay ku jiraan in ka badan 70,000 oo shaqo lagu dhejiyo.
Expatica - Haddii aad raadineyso xirfad aan kuu baahnayn inaad ku hadasho Dutch, shaqooyinka lagu dhajiyay waxay u badan yihiin Ingiriis.
LinkedIn waxay si siman waxtar ugu leedahay helitaanka shaqo Amsterdam sida ay tahay Maraykanka oo kale.
JobsInAmsterdam Waxaa loogu talagalay boodhadh hore waxayna liis garaysaa xulasho ballaaran oo shaqo oo laga heli karo warshado badan.
Haddii aad raadineyso tababar shaqo gaar ahaan? Iskuday Noocyada kala duwan ee tababarka 'GraduateLand', ama StartUs boosaska shirkadaha cusub iyo kuwa yaryar.
Raadi shaqaale qorista.
Intaa waxaa sii dheer, waxaa jira hay'ado badan iyo shaqaale qorista Amsterdam kuwaas oo kaa caawin kara ugaarsiga shaqadaada. Kuwa soo socdaa waa qaar ka mid ah hay'adaha sida wanaagsan loo jecel yahay:
Shaqaalaynta Qorista Luuqadaha Badan ee Adams
Ma dooneysaa inaad soo booqato dhammaan meelaha Kanada dhexdeeda, markaa waa imisa qiimaha ay ku safreyso Kanada?
Nidaamka Gaadiidka ee Afghanistan !!
Xayiraadaha safarka caalamiga ee Turkiga